Xildhibaannadii Shariif Xasan oo loo diiday in ay galaan Ceelbarde iyo xiisad ka taagan magaalada | Caasimada Online
Home Warar Xildhibaannadii Shariif Xasan oo loo diiday in ay galaan Ceelbarde iyo xiisad...
Xildhibaannadii Shariif Xasan oo loo diiday in ay galaan Ceelbarde iyo xiisad ka taagan magaalada
Ceelbarde (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaaraya degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool ayaa sheegaya in halkaasi ay ka taagan tahay xiisad ka dhalatay markii maanta degmada laga celiyay diyaarad siday xildhibaano baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan oo Xudur ka tagay.
Xildhibaanada oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa saaka ka tagay degmadaasi iyaga oo watta diyaarad, laakiin uma aysan suuro galin ujeedadii ay lahaayeen oo aheyd iney tagaan magaalada Ceelbarde.
Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya balse taageersan maamulka Bakool sare ayaa u muuqday mid ku faraxsanaa in ciidamada ku sugan degmadaasi ay dib u celiyaan diyaarada ka tagtay magaalada Xudur ee ka degtay magaalada Ceelbarde.
Xildhibaan Maxamed Iidle Geedi, oo saxaafada la hadlay ayaa sheegay in wax wanaagsan aysan aheyn in xildhibaanada la celiyo balse dhibka jira ayuu ku sheegay ineysan u dhalan deegaanka ayna wadin wax dadka deegaanka dani ugu jirto, sida uu hadalka u dhigay.
“Ceelbarde waxaa ka jira Maamul ay dhisteen dadka deegaanka oo rabitaankoodu ku shaqeeya, Xildhibaanaduna wax wanaag ah uma socon.”